Fisolokiana andraikitra :: Voafitak’ity lehilahy nisandoka ho kaomisera hatramin’ny vadiny • AoRaha
Fisolokiana andraikitra Voafitak’ity lehilahy nisandoka ho kaomisera hatramin’ny vadiny
Sarona, tamin’ny alakamisy 5 novambra lasa teo, ny fisandohan’ity lehilahy iray ho kaomiseran’ny polisy, efa efa-taona izao. Fantatra fa na ny vadiny sy ny rafozany aza tsy nahalala fa tsy tena polisy izy.
Nahatrarana karazana fitaovana marobe fampiasan’ny Polisim-pirenena sy basy tany aminy. Voasambotra niaraka taminy ny telo lahy mpiray tsikombakomba tamin’izao fisolokiany izao. Fisandohana andraikitra, fitazonana basy tsy ara-dalàna ary firaisana tsikombakomba no vesatra hiampangana azy efa-dahy.
Fampandrenesana azon’ny polisy momba ny fisiana olona mampiahiahy sy mitaky vola eny amin’iny faritra Ambohitsoa iny no niaingan’ny fikarohana azy ireo. Hita teny ny lehilahy iray, manodidina ny 29 taona, nanao fanamiana polisy misy galona kaomisera sady nitondra basy. Nentina natao famotorana izy. Nosavaina ihany koa ny tranony.
Tahaka ny basy tena izy…
“Nahatrarana karazana fitaovana fampiasan’ny Polisimpirenena, toy ny fanamiana, kiraro, grady kaomisera sy ofisie ary brigadien’ny polisy tao an-tranony. Nanondro ny namany hafa manana basy izy. Nalaina koa ny lehilahy roa avy eo. Efa nifonja noho ny trafikana basy ny namany iray hafa nosamborina tany Antsirabe. Basy poleta vita tanana saingy mitovy tanteraka amin’ny basy tena izy no azo tany amin’ireo lehilahy ireo”, hoy ny kaomisera Andrianalison Hami, lehiben’ny Kaomisaria foibe, etsy Tsaralalàna.
Fantatra fa novidian’ity kaomisera sandoka ity tao amin’ny Polisim-pirenena ihany ireo fitaovana nampiasainy. “Misy ny fepetra raisina ao amin’ny toerana fivarotana fitaovan’ny Polisim-pirenena manoloana izao tranga izao sy momba ireo fitaovana nivoaka”, hoy hatrany ny lehiben’ny Kaomisaria foibe etsy Tsaralalàna. Miantso ny olona mety ho efa voasolokin’ity kaomisera sandoka ity ny polisy mba hametraka fitoriana.
Fahamaizana tanana :: Trano sivy amby roapolo ravan’ ny afo nampirehetin’ny zazalahy iray